लेख – Page3– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:४६ English
बेगनासले बाँचेका मानिसहरु ६ श्रावण २०७६, सोमबार १३:१४
मध्यराती ठमेल बजारमा ………. २२ असार २०७६, आईतवार १३:१४
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २२ असार । राजधानी काठमाडौँमा २४ घण्टा नै खुल्ला हुने बजार हो ‘ठमेल’ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि यो क्षेत्र सधैँ खुल्ला रहन्छ । विशेषगरी पर्यटकलाई मनोरञ्जनका लागि खुल्ला गरिएको बजार क्षेत्र रात परेपछि निकै ब्यस्त हुन्छ । दिनको तुलनामा रातमा दोगुणा अझ बढी..
काँग्रेस कहाँ चुक्यो, जागरण अभियानको प्रभाव कति? १६ असार २०७६, सोमबार ०७:०८
नेपाली काँग्रेसको एकमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियान (प्रथम चरण) गत जेठ २५ गते सम्पन्न भएको छ । अत्यान्तै प्रतिकूल अवस्थामा सञ्चालन गरेको जागरण अभियानबारे विभिन्नखाले टीका–टिप्पणीहरू भइराखेका छन् । स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष टिप्पणीकारहरूको दृष्टिकोणमा ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा..
रक्तदान यात्रा स्मरण: रक्तदान अभियानकै लागि पटक पटक अफ्रिकामा ७ असार २०७६, शनिबार २३:०९
बिरामीहरुलाई रगत दिएर बच्चाउनु संसार भरमा एक सामान्य चिकित्सा उपचार हो । यस्तो भएता पनी धेरै बिरामीहरुले समयमा नै रगत नपाएर जीवन गुमाउने गरेका हामीले सुन्दै आएका छौं । केहीलाई भए पनि मेरो आफ्नै रगत दीइ बचाउँ, केहीलाई रक्तदान गर्न हौषला प्रदान गरुँ, केहीलाई उत्प्रेरणा गरुँ भन्ने..
मुलधारबाट बाहिरिएको काङ्ग्रेस ! ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०९:३३
नेपाली काङ्ग्रेसले सञ्चालन गरेको जागरण अभियानको पहिलो चरण सम्पन्न भएको जानकारी दिने सिलसिलामा पार्टी–प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक रोचक अभिव्यक्ति दिए । उनको भनाइको सार थियो– ग्यारेजमा थन्किएर रहेको काङ्ग्रेसरूपी बिग्रिएको गाडी स्टार्ट भएको छ, ठेलठाल गरेर सडकमा उतारिएको..
नागरिक र कार्यकर्ता फरक हुन् ? २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०७:१०
दुईतिहाइ प्राप्त (?) सरकारका गृहमन्त्रीले संसदमा नागरिक र कार्यकर्ता फरक भनेर भने । यो दुईतिहाइ भनेको संसदमा भएको दुईतिहाइ बहुमतले बनाएको सरकार हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले कानुनन स्त्रीलाई पुरुष र पुरुषलाई स्त्री पनि बनाउन सक्छ भन्ने भनाइ छ । किनभने संसद्ले कानुन बनाउँछ, त्यो..
ओली-अभिव्यक्तिको लहरमा अल्झिएको काँग्रेस ८ बैशाख २०७६, आईतवार ००:४६
०७५ सालको बिदाइ गरी हामी नयाँ वर्ष ०७६ मा प्रवेश गरेका छौँ । हाम्रो सन्दर्भमा बितेको वर्ष ०७५ नयाँ परिवेशमा विशेष खालको आशा र सम्भावनाका साथ प्रारम्भ भएको थियो । तर, जे–जस्ता अपेक्षा थिए र जे–जस्ता आश्वासन बाँडिएका थिए सोअनुरूप कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्दा नेपाली जनतामा निराशा..
सरकारको सफलता : एक वर्षभित्र संविधानद्वारा निर्दिष्ट कानून निर्माण १४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २२:५८
नेपालको इतिहासमै यो वर्ष सबैभन्दा धेरै कानून बने । विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता अनुरुप बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कानून बनेका हुन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सङ्घीयता अनुरुप कानून नहुँदा काम गर्न समस्या देखाप¥यो । ‘कानून निर्माण वर्ष–२०७५’..
सन् २०१८ का विश्व चर्चित घटनाक्रम: अनपेक्षित ट्रम्प देखी पत्रकार खशोज्जीको हत्या सम्म १७ पुष २०७५, मंगलवार ०४:३५
वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु पनि विश्वव्यापी भए । वर्षभरीका चर्चित मुख्य घटनाक्रमहरुको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरु नै धेरै भएका छन् । त्यस बाहेक हिंसात्मक, आपराधिक तथा अन्य विभिन्न घटनाहरु पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका..
चीन–अमेरिका विवादको प्रभाव ९ मंसिर २०७५, आईतवार ०२:३९
चीन–अमेरिका व्यापार युद्धबाट आफ्नो मुलुकको लाभका लागि वासिङ्टन र बेइजिङले गरेका प्रयास जारी छन् । द्वन्द्वले कसैलाई लाभ नगर्ने कुरा सत्य हो । त्यसैले यसबाट कम क्षति कसलाई हुने भन्ने मात्र हो । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गरेको व्यापारमा संरक्षणवादी नीतिले तत्काल..
बच्चालाई मोबाइल हेर्नबाट कसरी सीमित गर्ने ? सोचेजति सहज छैन ६ मंसिर २०७५, बिहीबार ००:३९
शनिबारको बिहान । १० वर्षीय हेनरी हेली उठिसकेका छन् । उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ । उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल “फोर्टनाइट” खेल्न थालिसकेका छन् । “लौ ? मैले जित्नै लागेको थिएँ, म त मरें,” उनी गस नाम गरेका साथीलाई..
काँग्रेस भित्रको अन्तरविरोध, देउवाको असफलता र कोइराला समुहको भूमिका २८ कार्तिक २०७५, बुधबार २२:३६
स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनको लज्जास्पद पराजयले राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसको हैसियत निकै खस्कन पुग्यो । सङ्घीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा उसको दोस्रो स्थान रहे पनि स्थानको हिसाबले ऊ धेरै नै कमजोर भयो । सरकार बलियो रहेकोले लुरे प्रतिपक्षीको आवाज सुनिने..
इतिहासको कसीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी १९ भाद्र २०७५, मंगलवार २२:३९
इतिहास जित्नेको लेखिन्छ, हार्नेको होइन । इतिहासको कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ज गराएको जितको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास हो । आधुनिक नेपालको प्रत्येक युगान्तकारी राजनीतिक आन्दोलनको सफल नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेर नै देशमा परिवर्तन सम्भव भएको थियो । एउटै..
प्रतिपक्ष कमजोर देखिए निरंकुशताको खतरा १३ जेष्ठ २०७५, आईतवार २३:३२
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १०९ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट हासिल गर्यो । दोस्रो पार्टी गोर्खा परिषद्ले १९ सिट पायो । सरकार गठन भएपछि गोर्खा परिषद्का बाग्लुङबाट निर्वाचित हरिदत्त उपाध्याय चालिसे आफ्नो पार्टीका सातजना सांसदलाई लिएर कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री बीपी..
नेताले कसको अभिभावकत्व लिने ? १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ००:०२
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मण्डल र डुम बालिकाको अभिभावकत्व लिनुभयो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पिटर र अरुणको अभिभावक बन्नुभयो । कुन मन्त्रीले कसलाई, सांसदहरू यसले उसको, उसले त्यसको… यो समुदायको बच्चाको अभिभावकत्व, ऊ समुदायको बच्चाको अभिभावकत्व…। निरक्षरता उन्मूलन गर्ने..
बलिया पुटिनमाथि चौतर्फी कूटनीतिक दबाब २४ चैत्र २०७४, शनिबार २१:४१
मोहिनी मिश्र रिसाल, काठमाडौं, २४ चैत । गएको मार्च १९ मा रुसको राष्ट्रपति पदमा पुनः वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नै निर्वाचित भएको समाचार आयो । यो समाचारले लभगभ विश्वमै चर्चा पायो । गएको करीब दुई दशकदेखि शक्तिको केन्द्रमै रहेका उहाँ फेरि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको..